चीनले सीमा मिचेको ‘फेक’ प्रतिवेदन बनाउने कारखाना खोज्दैछौं : परराष्ट्रमन्त्री | YesKhabar
चीनले सीमा मिचेको ‘फेक’ प्रतिवेदन बनाउने कारखाना खोज्दैछौं : परराष्ट्रमन्त्री
२०७७ साल असार १५ गते, सोमबार ०३:३५ PM
काठमाडौं - परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले चीनले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको झूटो प्रतिवेदन बनाउने कारखानाको खोजी भइरहेको बताएका छन् । नेपाल चीन सीमामा कुनै समस्या नभएको पनि उनले बताए ।
राष्ट्रिय सभाको सोमबार बसेको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले चीनले सात स्थानमा नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको भनेर आएको समाचारको खण्डन गरेका छन् ।
उनले गोरखाको रुई गाउँ चीनले अतिक्रमण गरेको खबरको पनि खण्डन गरे । उनका अनुसार दुई देशबीच औपचारिक सीमा निर्धारण हुनुअघि नै रुई र साना गाउँ लेकबेंसी जस्तो थियो । दुई देशले सीमा निर्धारण गरेपछि ११० घर कुरियालाई कता बस्ने भनेर रोज्न दिएको भन्दै उनले भने, ६० घर कुरियाले रुई र ४० घर कुरियाले यता बस्ने भनेर रोजे । त्यहाँ जबरजस्ती भएको होइन।’
तर चीनले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको समाचार कसरी आए ? फेक प्रतिवेदन कहाँ तयार भयो ? भनेर सरकारले खोजी गरिरहेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए ।
उनले भने, ‘त्यो सो कल्ड प्रतिवेदन कुन कारखानामा तयार भयो भनेर हामीले खोजी गरिरहेका छौं । त्यसमा संलग्नहरूलाई गम्भीरतापूर्वक कानुनी दायरामा ल्याउने छौं ।’
भारतसँग सम्पर्कमै छौं
नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समय लिम्पयाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा सीमा विवाद चर्किएको छ । गत नोभेम्बरमा भारतले लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गरेको थियो ।
नेपालले परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न प्रस्ताव गरे पनि भारतले चासो दिएन । उल्टो कोरोना महामारीका बेला लिपुलेकमा नेपाली भूमि अक्रिमण गरेर बनाएको सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोध जनायो ।
भारत फेरि वार्ताका लागि तयार भएन । त्यसपछि नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर सरकारले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको छ । त्यसअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न संविधानमा समेत संशोधन भएको छ ।
तर दुवै देशबीच सम्वाद हुन सकेको छैन ।